Ny kodiarana RFID dia hitondra revolisiona fiara vaovao! | Bestyre
Ny kodiarana matanjaka dia miaraka amina puce solosaina, na puce solosaina sy ny fifandraisana amin'ny vatan'ny kodiarana, afaka manara-maso sy manitsy ny mari-pana amin'ny fiara sy ny tsindry ataon'ny kodiarana izy mba hahafahany mitazona ny fepetra miasa tsara indrindra amin'ny toe-javatra samihafa, tsy vitan'ny hoe manatsara ny fiarovana, fa mamonjy vola ihany koa. Tombanana ho afaka taona vitsivitsy, ny kodiarana marani-tsaina dia afaka mamantatra ny faritra misy ny mando ary manova ny lamina kodiarana hisorohana ny fidorohana. Ny kodiarana Smart RFF dia hitondra revolisiona fiara vaovao!
Ankoatry ny matanjaka kokoa, mahazo aina kokoa sy mangina kokoa, ny fomba fanaovana kodiarana "maneho hevitra sy marani-tsaina" dia làlan'ny mpanamboatra kodiarana. Miaraka amin'ny fivoaran'ny kodiarana ho an'ny olona, ​​ny dikany dia misy ny fahafaha-manao marani-tsaina, fiarovana maitso. namolavola teknolojia sy vokatra isan-karazany amin'ny kodiarana marani-tsaina.Tsy ny revolisionan'ny kodiarana ihany ny faharanitan-tsaina, fa koa ny revolisiona amin'ny teknolojia famokarana kodiarana sy ny fitaovana famokarana. Ataovy izay hahatonga ny kodiarana ho marani-tsaina kokoa ary ho azo antoka kokoa ny olombelona.
Ny karazana faharanitan-tsaina voalohany: fanaraha-maso ny tsindry anatiny amin'ny vidim-piainana.
Ny kodiarana matanjaka dia ny kodiarana izay manangona sy mampita ny vaovao rehetra momba ny tontolo iainany, ary mandray ny fitsarana marina sy ny fizotrany izany fampahalalana izany. Ny fanaraha-maso ny tsindry anatiny amin'ny tsindry. Ny fanerena ny kodiarana dia olana lehibe miafina amin'ny fiarovana ny fifamoivoizana.
Faharanitan-tsaina faharoa: fizahana rakitsoratra azo zahana.
Ny firaketana ny firaketana ny firaketana, ny antsoina hoe firaketana ny fizotran'ilay fizahana dia takiana amin'ny dingan'ny famokarana - famelana - fampiasana (ao anatin'izany ny fikojakojana, ny fanavaozana) - fanesorana ny kodiarana isaky ny dingana famoronana fampahalalana, ary mety amin'ny fotoana rehetra raha ilaina .Ny firaketana ny fitadiavana tantara dia hisy: ny mombamomba ny kodiarana, izany hoe ny marika kodiarana, ny laharana famokarana, ny kaody DOT, ny toerana misy ny orinasa mpamokatra entana, ary ny daty namokarana; ny firaketana an-trano ny kodiarana, izany hoe ny fampidirana vaovao, mazàna dia ahitana ny laharan'ny spindle fiara, ny isan'ny rim; Ny fampiasana ny angona kodiarana, izany hoe ny mari-pana amin'ny kodiarana, ny fiakaran'ny vidim-piainana, ny hafainganam-pandeha, ny fihenjanana, ny fiovana sy ny tahirin-kevitra hafa ary ny fanavaozana teo aloha, ny fanamboarana; ny fampahalalana momba ny fako amin'ny Tyro, dia ny scrap antony, daty fanesorana. Raha hitady fomba hahatratrarana ny fanamoriana, ny fomba ankehitriny ao amin'ny literatiora dia ny fampidirana ireo karatra RFID (famaritana matetika ny onjam-peo) amin'ny kodiarana. Ny karatra FID dia karazana karatra micro sensor miaraka amin'ny solosaina
Function, izay misy ny singa ilaina rehetra amin'ny fanangonana vaovao, ny fanodinana angom-baovao ary ny fampitana vaovao.
Ny karazana faharanitan-tsaina fahatelo: fanampiana ho azy ny tsindry anatiny fidangan'ny kodiarana.
Ny famerenan'ny fiara ny tsindry anatiny ao anaty. Ny paompin-drivotra mitaingina fiara dia mety hameno ny tsindry anatiny amin'ny fiakaran'ny vidin'ny kodiarana. Raha vaky ny kodiarana dia hamoaka fanairana ny fitaovana fanaraha-maso ny tsindry anaty kodiarana, hoy ny solosaina on-board hanombohana ny paompy rivotra an-tsambo, ny paompy an-tsambo mankany amin'ny lavaky ny kodiarana feno lasantsy, mahatonga ny kodiarana hamerina ny tsindry anatiny misy vidim-piainana.
Ny karazana fahendrena fahaefatra: fanaraha-maso ny mari-pana amin'ny kodiarana.
Tyro amin'ny fizotran'ny fiara noho ny hafanana ary mampiakatra tsikelikely ny mari-pana, ny hafanana avo, ny tadin'ny hafainganam-pandeha, ny tadiny ary ny fahasimban'ny polymer avo hafa, izay miteraka fiainana fohy amin'ny pne. Ny rafitra fanaraha-maso ny mari-pahaizana amin'ny kodiarana dia misy faritra roa: sensor kely napetraka ao anaty kodiarana vatana, izay tompon'andraikitra amin'ny fikarohana sy ny fampitana ny angona mari-pana amin'ny kodiarana; mpamaky / mpamaky angona napetraka ao amin'ny tranon'ny mpamily mba handraisana sy hanehoana angona.
Faharanitan-tsaina fahadimy: fanaraha-maso ny masontsivana hafa.
Ohatra, ny fepetra mekanika mavitrika toy ny fihenan'ny kodiarana sy ny fanovana dia arahi-maso mba hanomezana angon-drakitra ny rafitra fiara mandeha fiara.
Ny kodiarana manan-tsaina dia hampaneno ny tandroka ho azy rehefa tojo ireto fepetra manaraka ireto: ny tsindry amin'ny kodiarana dia ambony na ambanin'ny sanda napetraka; ny mari-pana amin'ny Tyre dia mihoatra ny sanda napetraka; nisy nangalatra kodiarana. Ity karazana kodiarana ity dia hahafahan'ny mpamily hahafantatra ny toetran'ny ny kodiarana amin'ny fotoana rehetra, fikojakojana ara-potoana, mba hanitarana ny androm-piainan'ny kodiarana.
Ny kodiarana misy "id elektronika": pne RFID. Ny kodiarana RFID dia tsy mitovy amin'ny kodiarana mahazatra amin'ny lafiny kodiarana dia misy karatra RFID, voalohany ao amin'ny ozin-kodiarana dia voasoratra ao anaty laharana serial an'ny kodiarana, daty famokarana, kaody famokarana vokatra ary fampahalalana hafa, ary avy eo ao amin'ny tsipika fivoriambe farany nataon'ny mpanamboatra fiara hanoratra ny laharan'ny famantarana ny fiara, izay hampihena ny haben'ny fahatsiarovana raha toa ka misy olana kalitao.